Elizabeth Shydlovich's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Elizabeth Shydlovich
Elizabeth Shydlovich ndiye Musoro weInbound Marketing kuAwario, chishandiso cheSawaS. Iye inyanzvi yekushambadzira uyo anobatsira mabhizinesi esoftware anowedzera nzira dzekutengesa kuti awane vatengi, kutyaira traffic, kuzivisa, uye kuwedzera kutengesa.
Nzira shanu dzeKuteerera Kwemagariro Kunovaka Iyo Yekuzivisa KweBrand Unonyatsoda
Muvhuro, October 18, 2021 Muvhuro, October 18, 2021 Elizabeth Shydlovich
Mabhizimusi anofanirwa kuve nekuziva zvakanyanya kupfuura nakare kose kuti kungoongorora magariro enhau nekuyedza kugadzirisa kuzivikanwa kwechiratidzo hakuna kukwana zvakare. Iwe zvakare unofanirwa kuchengeta nzeve pasi kune izvo izvo vatengi vako vanonyatsoda (uye vasingade), pamwe nekuramba uchiziva nezveazvino maindasitiri maitiro uye makwikwi. Pinda kuteerera kwevanhu. Kusiyana nekungotarisa, iko kunotarisa kutaurwa uye nemitengo yekubatanidzwa, nzanga yekuteerera zeroes mukati memanzwiro